Mpanamboatra Lycopene tsara indrindra sy orinasa | CCGB
Tomaty tsara kalitao avy any Xinjiang
Miaraka amin'ny haitao misy patanty any Shina sy Etazonia, ny fanavaozana ny haitao lehibe sy ny fampiharana ny fananganana orinasa voatabia dia nahazo ny loka faharoa tamin'ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia nasionaly.
Source Botanical: Voatabia
Akora ilaina: Lycopene, Phytofluene, Phytoene
Manohana: ny fahasalaman'ny kardia sy ny fahasalaman'ny prostaty, manampy amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny ADN sy ny sela, ny fanoherana ny taratra, manatsara ny fahasalaman'ny hoditra.
Miaraka amin'ny hoditra sy voatabia kalitao tsara kalitao avy amin'ny faritanin'i Xinjiang amin'ny maha akora azy
Mamoaka lycopene amin'ny voan'ny hoditra voatabia Xinjiang amin'ny alàlan'ny teknolojia miavaka izahay. Ny fahadiovan'ny vokatra dia mety hahatratra 90% mahery. Ireo mari-pamantarana ny loza toy ny benzopyrene sy dioxin dia afaka mameno ny fenitra EU.
Etazonia Patent: US 9,434 886, B2
 Fantsom-bokatra iray manontolo, fototra iorenan'ny zavamaniry
 tsipika famokarana mandeha ho azy lehibe, misy kalitao avo lenta
 Ny capacité dia 30000.00kg
Ent Etazonia Patent: US 9,434 886, B2
 Misafidy voatabia avo lenta avy any amin'ny faritanin'i Xinjiang izahay, mampiasa ny haitaonay madiodio tsy manam-paharoa hitrandrahana lycopene amin'ny hoditry ny voatabia, 90% ny votoatin'ny kristaly lycopene.
Ny Benzopyrene, dioxine ary loza hafa dia mifanaraka amin'ny fenitry ny EU.
☆ Vovon Lycopene 5% & 6% & 10% & 20% HPLC
☆ Solika Lycopene 6% & 10% HPLC
☆ HPLC Lycopene CWD 2%
☆ Lycopene mety levona amin'ny rano 5% HPLC
Kitapo Alu 1kg * amponga 25 / baoritra
Amponga baoritra 20kg PE
2.5kg Alu Bag * 10 / baoritra baoritra
Teo aloha: Curcumin
Manaraka: marigold extract-zeaxanthin